Akhriso: Ajenadaha Ra’iusul Wasaare Kheyre ee Koonfur Galbeed – Goobjoog News
Akhriso: Ajenadaha Ra’iusul Wasaare Kheyre ee Koonfur Galbeed
in Gobalada, K/Galbeed, Wararka Dalka
Ra’iisalwasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Kheyre ayaa maanta safar ku tagay magaalada Baydhabo ee caasimadda KMG u ah dowlad gobaleedka Koonfur galbeed Soomaaliya, waxaana garonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay maxaweynaha Koonfur galbeed Cabdi Caziz Lagta Gareen, guddoomiyaha balaanka iyo xildhibaanno.
Ra’isul wasaraha ayaa bushda magalaada kula hadlay garoonka kubadda cagta ee magaalada Baydhabo, isaga oo ugu mahadceliyay sida diiran ee ay u soo dhaweeyeen, Kheyre ayaa bulshada ka balanaqaaday in dowladda federaalka ay kaalinteeda ka geysanayo dhismaha ka socda Garoonka kubadda cagta magaalada Baydhabo.
Sidoo kale Ra’iisal wasaaraha ayaa la filayaa inta uu joogo Baydhabo inuu la kulmo madaxweyne Cabdi Caziiz Maxamed Laftagareen wax garadka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan saraakiisha ciidama qeybta 60-aad, asaga oo kala hadli doona sidii loo furi lahaa amnina loogu heli lahaa wadada xariirisa Magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho.
Dhanka kale ra’isul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa lagu wadaa inuu maalinimada barrito uu magaalada Baydhabo ka daahfuro shir ay ka soo qeyb galayaan hey’ado caalamiga isaga oo kala hadli doona sidii deegaanada koonfur galbeed mashaariicyada hormarineed ee laga fulinaayo sidii ay gacan uga geysan lahaayeen.
Mudane Kheyre ayaa sidoo lagu wadaa inuu gaaro deegaano kale oo Koonfur galbeed ah sida gobalka Bakool iyo magaalo xeebeedka Baraawe ee gobalka Shabeellaha hoose oo la filaayo inuu mashaariic hormarineed ka dhagax dhigo.
Askari Haweeney Ku Dilay Magaalada Muqdisho
Dab Ka Kacay Kaam Ku Yaalla Magaalada Garoowe
Howlgallo Ka Socda Shabellaha Dhexe